वैशाख ९ गते एमाले-माओवादी एकता नहुने
काठमाडौँ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वैशाख ९ गते पार्टी एकता नहुने भएको छ ।
मंगलबार बिहान पार्टी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले विधान तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन नसकेकाले ९ गते एकता नहुने भएको हो ।
बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले दुई अध्यक्षलाई सो जिम्मेवारी दिएको र समितिको अर्को बैठकमा एकताको मिति तय गरिने माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित संयोजन समितिको बैठक बसेको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगाडी एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताइए पनि एकता संयोजन समितिले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र दिएका सुझाव ग्रहणमात्रै गरेको थियो ।
किन भएन बैशाख ९ गते एकता ?
चैत्र २५ गते भारत भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमबार बिहानको छलफल पछि आज संयोजन समितिको बैठक बसेको हो । एमालेले दुई अध्यक्षको छलफल सकारात्मक भएको भने पनि माओवादी पक्षले छलफल नतिजाउन्मुख नभएको बताएको थियो ।
क) प्रधानमन्त्री ओलीसँग माओवादी सशंकित
ख) नेपाल र ओलीको साठगाँठले प्रचण्ड तर्सिए :
के के हुन् विवादका विषय ?
क) ५०-५० प्रतिशतको भागबन्डामा एकता :
ख) ‘जनयुद्ध’ शब्द :
ग) चुनाव चिन्ह :
एकताका लागि माथि उल्लेखित कारणहरु बाधक रहेको बाहिर ल्याइएको भएपनि प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीचको सत्ता बार्गेनिङ नै प्रमुख रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली ५ बर्ष पुरा सरकार चलाउन चाहन्छन् भने प्रचण्ड साढे दुईबर्षपछि आफु प्रधानमन्त्री हुने ग्यारेन्टी खोजीरहेका छन् । ओली निकटस्थ नेताहरुले पनि अहिले एकता प्रक्रियामा अन्योलता देखिएको प्रमुख कारण सत्ता नै रहेको बताएका छन् ।